अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीका शेयर आधारभूत मूल्यमै - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौँ, कात्तिक २९ ।
कुनै समय शेयर लगानीकर्ताका लागि प्रमुख आकर्षक मानिएको जलविद्युत् कम्पनीका शेयर बजार घटेसँगै नराम्ररी ओरालो लागेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएका २१ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये तीन कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य रु २०० माथि रहेको छ । केही कम्पनीको शेयर त आधारभूत मूल्यभन्दा पनि तल पुगेका छन् । शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा त्यसको प्रभाव जलविद्युत् कम्पनीका शेयरमा समेत परेको छ । राम्रो भनिएका र ठानिएका कम्पनीको शेयरसमेत आधारभूत मूल्यको हाराहारीमा रहँदा त्यसले लगानीकर्तालाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
कुनै समय जलविद्युत् कम्पनीको शेयर लगानीकर्ताका लागि प्रमुख आकषर््ाणको थलो रहँदै आएको थियो ।
लामो समयदेखि ओरालो लागेको नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको बजारमा प्रतिकित्ता शेयर रु ७७ मा खरीद बिक्री भएको छ । बुधबार सो कम्पनीको शेयर आधारभूत मूल्यभन्दा रु २३ कममा खरीद बिक्री भएको छ । यस्तै दिव्यश्वेरी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरसमेत आधारभूत मूल्यभन्दा कममा खरीद बिक्री भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस शेयर बजारमा गिरावट
सो कम्पनीको प्रतिकित्ता शेयर रु ९७ मा खरीद बिक्री भएको स्टकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
घट्दो बजारको प्रभाव खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई समेत परेको छ । सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ९७ मा कारोवार भएको छ । आधारभूत मूल्यभन्दा तल झरेको सो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नकारात्मक प्रभाव परेको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको शेयरबाहेक अरु जलविद्युत् कम्पनीको अवस्था खराब रहेको नेप्सेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारी स्वामित्वको चिलिमे कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ६८८ मा कारोवार भएको छ । कुनै समय चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा पनि लगानीकर्ताको उल्लेख्य चासो रहने गर्दथ्यो । पछिल्लो दिनमा सो कम्पनीको शेयरमा समेत उच्च गिरावट आएको छ ।
याे पनि पढ्नुस बीमा कम्पनीका शेयरबजार : बजार घटे, साख घटेन
स्टकका अनुसार अरुण काबेली जलविद्युत् कम्पनीको शेयर रु २१२, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको रु १२६, बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर रु १२१ मा खरीद बिक्री भएको छ । रु ५०१ मा थप सार्वजनिक निष्काशन गरेको बुटवल पावर कम्पनीको शेयरसमेत घटेको छ । सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ४६० मा खरीद बिक्री भएको छ । शेयर बजार ओरालो लाग्दा त्यसको प्रभाव छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको शेयर रु १०८, कालिका पावर रु ११३, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स रु १२० मा खरीद बिक्री भएको छ । हिमालयन पावर पार्टनर रु २०५, ङादी ग्रुप पावर रु १२९, पञ्चकञ्या माई रु १२३, राधी विद्युत् कम्पनी रु १८० र रैराङ हाइड्रोपावरको शेयर प्रतिकित्ता रु १११ मा खरीद बिक्री भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस ऋणात्मक सेयर बजार, बढ्यो कारोबार
यस्तै रिडी हाइड्रोपावरको शेयर रु १०५, सिनर्जी पावर डेभलपर्स रु १०० र युनाइटेड मोदीको प्रतिकित्ता रु १४३ मा खरीद बिक्री भएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत सानिमा माई जलविद्युत् कम्पनीको कुनै तथ्यांक देखिएको छैन । धितोपत्र बोर्डमा १५ जलविद्युत् कम्पनीले साधारण शेयर बिक्रीको तयारी गरिरहँदा दोस्रो बजारमा भने जलविद्युत् कम्पनीका शेयर निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । कात्तिक १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले रु एक अर्ब ५८ करोड बराबरको साधारण शेयर बिक्री ग¥यो भने बुधबारदेखि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीले रु एक अर्ब ४४ करोड बराबरको सीमित साधारण शेयर बिक्री शुरु गरेको छ । रासस
ट्याग्स: nepal stock exchange
मान्छेमाथि कोरोनाको खोप परीक्षण अन्तिम चरणमा
फुल्पिङमा पहिरोः २ घरका ५ बेपत्ता
थुप्रै अर्बपति, नेता र कम्पनीका ट्विटर खाता ह्याक
आजदेखि उपत्यकाका यी ८ रुटमा चल्नेछन् साझाका २६ बस (सूचीसहित)
भारतमा कोरोनाले बनायो नयाँ रेकर्ड, लकडाउनमा कडाईं गरिँदै
प्रचण्डले ओलीसमक्ष राखे ९ बुँदे नयाँ प्रस्ताव (सूचीसहित)
एक महिनामा पहिरो र चट्याङबाट १०० को मृत्यु, ४३ बेपत्ता
नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका ३९औँ व्यक्ति अरूभन्दा ‘फरक’
(CNN) "I leave elective office with my integrity in tact," Jeff Sessions said Tuesday night following his rout at the hands of former Auburn University football coach Tommy Tuberville inarunoff for the Alabama Republican Senate nomination. "This chapter of my ...
Dow rallies 300 points on positive vaccine-trial data, blockbuster Goldman earnings
US stocks rose Wednesday after drugmaker Moderna announced an early coronavirus vaccine trial produced antibodies in all participants. Major indexes were also lifted by strong quarterly earnings from Goldman Sachs, which saw the firm handily beat ...
Tech entrepreneur's dismembered body found in luxury New York condo
NEW YORK (AP) — Police say the dismembered body ofa33-year-old tech entrepreneur has been found inside his luxury Manhattan condo. This video is no longer available. Investigation continues into dismembered body found in Lower East Side ...
Sarasota School Board wants to push back school year
The board's proposal would have to be approved by the state, but members hope delaying the start of school until the end of August will buy the district time to deal with COVID-19. This content is being provided for free asapublic service to our readers during ...
'Real Housewives of Atlanta' star Porsha Williams among 87 arrested at Breonna Taylor protest
(CNN) "Real Housewives of Atlanta" star Porsha Williams was among 87 protesters arrested outsideahome owned by Kentucky Attorney General Daniel Cameron. The protesters, who occupied the front yard of the home and chanted support for Breonna ...